Col Barre Hiiraale iyo Wafdi uu hogaaminaayo oo Muqdisho ku soo wajahan si uu kulan u la qaato Madaxda cusub ee Wadanka Somalia
Col Barre Hiiraale iyo Wafdi uu hogaaminaayo oo Muqdisho ku soo wajahan si uu kulan u la qaato Madaxda cusub ee Wadanka Somalia. Waxaa shalay Magaalada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo ka soo baxay wafdi u hogaaminayo Col Barre Adan Shire Barre Hiraale waxaana ay ku wajahan yihiin Magaalada Muqdisho ee Casimada Wadanka Somalia.
Kornelka iyo wadiga uu hogaaminayo ayaa waxaay transit ku yihiin Magaalada Nairobi ee Xarunta Wadanka Kenya ayagi markaasi uga sii gudbaya Magaalada Muqdisho.
Ujeedada Safarka Masuulkan ayaa waxaa lagu shegay in uu u socdo Wadatashiyo uu la yeelan doono Madaxda Cusub ee Somalia.
Ilo ku dhow dhow Wafdiga Barre Hiiraale ayaa waxaa warbahinta uu shegen in Barre uu Kulan qaas ah la yeelan doono Madaxweyne Xasan Sheikh ayago ka wada hadli doono Arimo ku sabsan Jubboyinka iyo Gedo.
Sido kale Wafdiga Barre Hiiraale ayaa waxaay Madaxweynaha Cusub kala hadlaan Cida ku haboon qabashada R/wasaraha Somalia.
Col:Barre Hiiraale ayaa waxaa Magaalada Muqdisho ugu danbeysay Xiligi uu ahaa Wasiirka Gaashandhiga Somalia markaas oo ay si weyn isku qabteen Madaxweynihi hore alaha u naxariste Cabdilahi Yusuf Axmed oo asagu damcay in Col Barre u adeegsado Xasuuqa Shacabka Muqdisho balse uu barre ka diiday deedna xilki laga qaday islamarkaasna lo warejiyay Magaalada baydhabo oo markaasi ahayd Xarunta labaad ee Dowladi Cabdilahi Yusuf
Barre ayaa waxaa manta Garoonka diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho ku sugaya dadweyne badan oo reer Muqdisho ah kuwaas oo xasuusan abaalki uu u galay Xiligi Muqdisho uu ka socday Xasuuqa Shacabka.